Ithegi: intengiso yebhilibhodi | Martech Zone
Ithegi: intengiso yebhilibhodi
Ngexesha lobhubhane, intengiso yentengiso yathatha indawo. Kulindeleke, kunjalo, kodwa i-19.1% yehla kwi-H1 220 yimpembelelo enkulu kumashishini. I-COVID-19 iyitshintshile imeko yabathengi, njengoko inezinye izinto ezininzi zobomi bemihla ngemihla. Abantu bahamba kancinci kwaye bachitha imali encinci. Ubhubhane ngethemba lokuba uza kuphela kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, kodwa ezi nyanga ziye zonyusa utshintsho oluphambili ebesele luvela kwihlabathi lentengiso. Iselfowuni
Ndandiqhuba eWest Side yedolophu, ndakhangela ngaphaya kwibhodi yezaziso, kwaye kukho ibhodi yezaziso yezixhobo. Endaweni yokuba ibhilibhodi ibeyintengiso eqhelekileyo, isibhengezo siye yonke indlela emhlabeni. Ingalo ibaleke eposini kwaye esona sixhobo besikwibhodi yezaziso. Kwakubonakala ngathi ingalo yayiza kanye emhlabeni. Ukuba bendidinga isando, bendiya
NgoLwesithathu, Julayi 15, 2009 NgeCawa, uJuni 21, 2015 UAdam Omncinci
Ukuthengisa ngeselula kuyavela kwaye kuya kuba yinto eqhelekileyo mihla le. Kwiveki ephelileyo bendindwendwele usapho kwindawo yaseMyrtle Beach kwaye ndabona le bhodi. Kwakumnandi ukubona umtsalane ophambili odibanisa iselfowuni kwisicwangciso sabo sokuthengisa. UDoug unodibaniso olufanayo lweselfowuni kwindawo yakhe, ungathumela umyalezo ngeMartechLOG ku-71813 kwaye ufumane isaziso xa eposa! Ndinqumle ikhowudi emfutshane kulo mfanekiso ukuze kungabikho mntu unokuhendwa